Tezera f’aza manoto! - ewa.mg
News - Tezera f’aza manoto!
Ilaina ampatsiahivina amin’ny sokajin’olona maro foana fa ny toerana no mitoetra saingy ny olona no mandalo. Tsy misy tompon-toerana ho doria izany! Noheverina ho efa lefy mantsy ny fanesorana ny mpanazatra nasionalin’ny ekipampirenena malagasin’ny baolina kitra na Barea ary mivonona amin’ny fandraisan-toeran’ny mpandimby azy ny rehetra. Akory ny hagagana rehefa nahita ny fanehoan-kevitry ny mpilalaon’ny Barea iray izay mivoatra any ivelany. Saika nikasa hanao ampamoaka angaha hoe sa saika haninona fa nihemotra tampoka nony injay nahita ny teny mafy nasetrin’ireo mpikirakira Facebook raha namaky an’izao filazany ny « fifandraisana mafimafy eo amin’izy sy ny mpanazatra vaovao » izao.
Tsy tokony hohadinoina, indrindra ho an’ireo matihanina amin’ny fanatanjahantena, fa ny vokatra no lehibe indrindra. Na inona na inona mety ho kendritohina nandrasan’ny mpanapa-kevitra talohan’ny nanesorana an’i Nicolas Dupuis, mpanazatra nasionaly teo aloha, dia tsy nanome rariny azy ny vokatra farany izay nahararaka antsika ka tsy nahatafakatra ny Barea amin’ny CAN 2021. Mety ho toy ny piti-dranomamy nararaka tany an-dranomasina fotsiny ireny kiana momba ny fampivadiana andraikitra hafa amin’ny naha mpanazatra nasionaly azy ireny, na koa ny fifanarahana aradoka sy ny sisa, raha tafakatra CAN teo indray isika. Ny vokatra, ny vokatra ihany no manan-danja!
Asa raha mila mianatra mamalona pejy isika isaky ny misy fanovana, na amin’ny lafiny inona na inona. Handroso aiza raha hivazavaza sy hitabataba lava amin’ny zavatra efa lasa? Zon’ny tsirairay kosa, indrindra ireo mpilalao azo antsoina handrafitra ny ekipam-pirenena, ny mankafy na mankahala ny mpanazatra nasionaly vaovao. Fa aoka haverina (ampianarina) indray fa voafehin’ny fitsipiky ny baolina kitra iraisampirenena ny famalian’ireo mpilalao ny antso amin’ny fifantenana ataon’ny mpanazatra nasionaly. « Sélectionneur » mihitsy moa no famaritana azy amin’ny teny frantsay na azo adika hoe « mpifantina » fa isika no nizatra tamin’ny hoe «mpanazatra nasionaly ».
Masi-mandidy ny « mpifantina ». Mamaky ady ary tahaka ny manava-tena sahady ireo mpilalao be fanakianana, indrindra moa raha tsy mbola nisy na inona na inona noporofoin’ilay mpanazatra vaovao akory. Tsy vitan’ny halako bika tsy tiako tarehy izany famaliana sy fanajàna ny ekipam-pirenena izany. Tsy vitan’ny tora-po ary tsy azo ampidirana fihetsem-po ka hoe mety ho tsara fifandraisana tamin’ilay teo aloha ianao dia hanao zinona an’ilay misolo toerana. Mba misy fifanajana faran’ny bitika ihany no mila tazonina fa tsy entinentin-javatra eny amin’ny tambajotran-tserasera eny. Manahirana sady tena manakorontan-javatra ny « teny tsy voahevitra ». Asa koa na ny tsy famarinan-toeran’ny Federasiona malagasin’ ny baolina kitra ankehitriny no mampivaralila an’ireo mpilalao sasany.
Angamba, fotoanan’ny fahasahiana mampihatra ny fitsipipifehezana ihany koa izao, fa efa fahita izany mpilalao fantadaza maneran-tany izany no nitodihan’ny mpanazatra lamosina nandritra ny taona maro noho ny raharaham-pitsarana nitambesatra taminy. Ny toerana mitoetrana fa ny olona mandalo. Nisy ireo mpilalao malagasy niampanga ny federasiona kanefa niverina am-bala ihany. Izao indray ka misy miampanga mpanazatra na tsy mbola nisy asa natao mety nahafahana nanamelohana azy akory aza. Te hahazo vokatra ny Barea. Irariana ho lasa lavitra ny Barea. Tiana hivoatra ny Barea. Fa tsy hahatonga ny Barea hatraiza raha tsy mbola miainga akory dia efa terena hisy siasia sahady!
L’article Tezera f’aza manoto! est apparu en premier sur AoRaha.
Handraisana ny marin’ny covid-19: hatao hopitaly ireo hotely lehibe
Nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo ihany no nahafantarana fa havadika hopitaly vonjimaika ny trano fandraisam-bahiny. Manoloana ny fahafenoan’ny hopitaly mandray ireo marary misy tranga misy fahasarotana, hosokafana hatao hopitaly koa ireo hotely lehibe afaka miara-miasa amin’izany. Hisy dokotera roa sy mpitsabo mpanampy valo ireny hotely ireny hiandraikitra ireo marary. Hametrahana fanafody fitsaboana momba ny covid-19 ihany koa amin’izany toerana izany. Ankoatra izany ny concentrateur d’oxygène.Handoavam-bola kosa anefa ny fikarakarana rehetra amin’izany toerana izany. Hofaritan’ny fanjakana sy ny tompon’ny toerana ny vola aloa amin’izany.Tsy manan-tsafidy intsony ny marary haka efitra mitokana eny amin’ny hopitaly mba hilamina sy ho voakarakara tsara amin’izao fotoana noho ny hamaroan’ny olona miditra eny. Afaka misafidy ny hotsaboina any amin’ireny hotely fandraisam-bahiny ireny, araka izany, ireo olona manana fahefana amin’izany. Mitokana ny efitra, milamina, voakarakara tsara sy madio ny manodidina ary voaara-mason’ny dokotera sy ireo mpiasan’ny fahasalamana akaiky.Tatiana AL’article Handraisana ny marin’ny covid-19: hatao hopitaly ireo hotely lehibe a été récupéré chez Newsmada.
Karibotel Analakely: namoaka ny boky « Saina miabo » Rasamy
Nivoaka ny zoma teo ny boky « Saina miabo », sanganasan-dRasamison Aimé na Rasamy. Izany dia notanterahina tetsy amin’ny Karibotel Analakely, izay narahina fampisehoana mahakasika ny boky. Miisa 70 pejy ny boky ary ahitana tononkalo 65 ao anatiny. Nanao ny teny fanolorana sady nikabary nampahalala izany i Nalisoa Ravalitera, izay tazana teny an-toerana ihany koa. Tononkalo maro no novelomina nandritra ny fampisehoana, anisan’izany ny “Misaotra azy”, ny “Meteza ho mpandresy”, ny “Ankafizo ny fiainana” sy ny maro hafa… Nanomboka tamin’ny 9 ora sy sasany maraina ny seho, natrehin’ny olona nasaina manokana. Ny fisakafoana antoandro kosa dia nisy antsan-tononkalo nampitondraina ny lohahevitra “Rediredin-dRasamy” sy ny vazo an-gitara teny anelanelany teny, nifarana tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro izany. Nikarakara ny sakafo ny Karibotel, izay havanana rahateo amin’izany ka nahazo fahafinaretana feno ny mpanatrika. Nanomboka tamin’ny 3 ora hariva kosa ny “Rediredin-dRasamy masirasira”. Nandritra izany, nitohy ny fivarotana ny boky, marihina fa boky faharoa izy ity raha ny “hafatra” no boky mirakitra tononkalo voalohany navoakany, ny taona 2018. Velona ny literatiora, miroborobo ny famoaham-boky isan-karazany ataon’ireo mpisehatra ara-javakanto, anisan’izany ny sanganasan’ny poeta sy mpanoratra samihafa ary matetika arahina seho izany. Manomboka manome sehatra ny haisoratra ihany koa ny Karibotel Analakely raha ny tontolon’ny mozika no mahazatra ny maro rehefa faran’ny herinandro. NarilalaL’article Karibotel Analakely: namoaka ny boky « Saina miabo » Rasamy a été récupéré chez Newsmada.
Hier, jeudi 9 septembre 2021, deux ministres se sont rendus à Antsiranana, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Edgard Razafindravahy et le ministre de la Pêche et de l’Economie bleue. Après avoir été reçus par l’autorité locale dirigée par le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky, les deux membres du gouvernement se sont rendus directement à la SECREN (société d’étude, de construction et de réparation navale). Établissement datant des années 1940, la SECREN est en difficulté depuis les années 1990. « Un patrimoine de savoir faire et d’expérience hérité de la DCAN Marine Française 1945 », l’économie de cette société vit au rythme de la vie politique à Madagascar. Après quelques jours de grèves, les ouvriers de la SECREN bénéficieront d’une subvention afin que leurs salaires d’un mois et demi soient payés la semaine prochaine. « L’Etat a la volonté politique pour redresser la SECREN qui est non seulement le poumon économique de la région Diana mais celui de la Nation malgache ». Pourtant, ce poumon est perforé depuis trente ans. L’Etat a tendance à rejeter la faute sur le directeur général, mais n’a jamais reconnu qu’il a prélevé des sommes exorbitantes lorsque la société était en période de « vache grasse ». Iss Heridiny L’article Antsiranana : La Secren maigrement subventionnée a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Lozam-pifamoivoizana – Bongatsara: tovolahy iray maty voafaokan’ny fiara 4X4
Nitrangana lozam-piarakodiana namoizana ain’olona indray teny Bongatsara, omaly. Maty notrongisin’ny fiara 4×4 iray ny tovolahy iray. Nipitika lavitra mihitsy ity tovolahy niharam-boina noho ny dona mafy nahazo azy. Potika ihany koa ny lohan’ilay fiara 4×4 namoa-doza. Nentina nialana nenina ihany ilay niharam-boina, saingy tsy nisy azo natao in­tsony. Tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana momba ity loza nitranga ity ny zandary. Matetika ahitana lozam-piarakodia hatrany amin’ny RN7 iny, indrindra eny amin’ny kaominina Bon­gatsara. Eo aloha ny fahateren’ny lalana kanefa ireo fiara manapatra amin’ny hafainganam-pandeha. Fa tapaka ihany koa ny lalana teny amin’ny RN2 mihazo an’i Toamasina tao Marovoalavo, omaly, noho ny fivadihan’ny kamiaobe iray noho ny halaman’ny lalana. Kamiaobe iray no narian’ny hisatra tampoka satria nitazona izany noho ny lalana malama ka nivadika teo afoavoan’ny arabe. Isan’ny lalam-pirenena ahitana loza ihany koa ny RN2, tsy misy afa-tsy ny fitandremana ihany satria tampoka ny fiavian’ny loza.J.CL’article Lozam-pifamoivoizana – Bongatsara: tovolahy iray maty voafaokan’ny fiara 4X4 a été récupéré chez Newsmada.
Fitaterana eto an-dRenivohitra: takina fahazoan-dalana ireo taxi-be mitatitra mpianatra sy mpiasa
Nampahatsiahy ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny amin’ny tsy maintsy akana fahazoan-dalana ho an’ireo fiara manao fitaterana manokana na amin’ny atoandro izany na amin’ny alina.Voakasik’izany ny taxi-be izay manao fitaterana manokana ireo mpianatra rehefa maraina mamonjy fotoana amin’ny 8 ora sy rehefa mody amin’ny hariva. Mila manana fahazoan-dalana izy ireny alaina eny amin’ny lapan’ny Tanàna. Manao ny asa fitateram-bahoaka ihany ireny taxi-be ireny rehefa atoandro. Tafiditra ao anatin’izany koa ireo fiaran’olon-tsotra mikarama maka sy manatitra mpianatra.Ireo fiara mpitatitra mpiasa ihany koa dia tokony hanana fahazoan-dalana manokana amin’ny fanaovana izany asa izany. Maro izy ireny, amin’izao fotoana, indrindra ireo miasa amin’ny “call center” miditra amin’ny alina na maraimbe.Ankoatra ireo ny fiara vaventy rehetra mivezivezy ivelan’ny ora voafaritry ny lalàna dia mila manana fahazoan-dalana hivezivezy “autorisation de circuler”.Ireo fiaran’ny orinasa rehetra izay manatitra entana amina toerana iray na eny amin’ny mpivarotra dia tsy maintsy manana fahazoan-dalana manokana hahafahany manao izany asa izany “autorisation de livraison”.Ao amin’ny sampandraharahan’ny fitaterana an-drenivohitra, ao amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, varavarana faha-36 avokoa no hikarakarana izany fahazoan-dalana izany. Manana fe-potona hatramin’ny faran’ny volana marsa ny rehetra handaminana izany.Hisy ny fisavna hentitra izay mitarika avy hatrany amin’ny fanasaziana ho an’ireo izay tsy manana fahazoan-dalana mifanaraka amin’ny asa tanterahiny.Tatiana AL’article Fitaterana eto an-dRenivohitra: takina fahazoan-dalana ireo taxi-be mitatitra mpianatra sy mpiasa a été récupéré chez Newsmada.